March 2019 – Arakan Yoma
ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း – မတ်လ စတုတ္တ သီတင်းပတ် [မြန်မာသာအစီစဉ်]
Posted on March 30, 2019 April 6, 2019 by Editor
Posted on March 30, 2019 April 5, 2019 by Editor
Htoo | Arakan Yoma ​မော့စ်​​ဂေါဒါတ်​စစ်​​တွေတုန်​ဆတ်​ရိုးကျဒူယာဝိုင်​​နောဘာနိထူးယပ်​တဲ့​ရေဂါဝါကူလပ်​ ဆတ်​ရိုးကျ​နော်​ဝါ​ဆောလ်​ဒူယာကာဇာမာသယ်​ ဂူရာဘုတ်​၊ဒင်​ဂွဘုတ်​ကူလီမာနုဒီဂီးဘာ ဒီနငအူဒီလပ်​ဒက်​ဂပ်​ယာအက်​ကင်​ကူလပ်​ဆတ်​ရိုးကျ​ရေဂါ​တော်​လတ်​မာသယ်​ ဂုံ​တော်​ဂါဂျယ်​မာနုအာသယ်​ တာရာကူလပ်​ ကူမျှာ​တော်​ဂင်​ ​ခေါ​တော်​ဂင်​ ကူဒီဘီ​ဂျောင်​ အက်​ဒီနပ်​​ဟော်​ဒုံပါ ဟီ​ဟော်​​ဘော်​ရင်​နိရပ်​ ဖူဇာလူ​ယောရပ်​ ဒါတ်​​တော်​မာနုကျုံ စူနိပါလိုက်​ ​ဟော်​​ဘော်​ဒီယုံ ဒီနင်​​လောတ​ပေါင်းသလ်​အာလပ်​စစ်​​တွေဆတ်​ရိုးကျ​ရေဂါ​တော်​လတ်​ မာနုအက်​​ဇောင်​ဗစ်​အက်​ကွဒူရီ​ယောရပ်​ပါနီမာသယ်​ ဒူဘတ်​၊အူတတ်​ဂူရိအာသယ်​တယ်​မာနုကျုံ​နောရပ်​ဒီဂီးဘာ အာဂယ်​ပါနီမာသယ်​ဗစ်​ကျွရဲ့ဂူဒါ​ပေါ့ရစ်​ ဗစ်​ကျွမာသယ်​ ခါးဇာဒူဗုရုံဘာနိ​ထူပါတယ်​ ပါနီ​ယောဒူဘီလပ်​ ဂယ်​ယာဝါနိကာဒါ​နော်​ဇာဖင့်​ပီလင်​​ငေါဗင်​ငှာ လွှားဗင်​ငှာထား​ဘောနပ်​ဘီလီဘီဂျီရာ​ပေါ်ရစ်​ ထားလပ်​​ကော်​ဇာ​ပေါ်ရစ်​ ယာ​နောဂုံအာသယ်​ […]
Arakan Yoma |March 30 ​မော့စ်​​ဂေါ့ဒါတ်​မင်းပြားပန်း​မြောင်း​ငေါကန့်​​ညှောမာသယ်​ကမ္ဘာစားနပ်​ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP တုမ်း၊ဆိုးလ်​၊၊ ၊တမ်လ်​၊ဘာဒင်​၊ နူးကူးလပ်​မတ်​လ(27)တိန်​​နောဂျယ်​ကန့်​​ညောမာသယ်​မာနု(2300)အာနိအာသယ်​ပန်း​မြောင်းမာသယ်​ကန့်​(3) နှင့်​ အာသယ်​မာနုအက်​​ဇောင်းမာသယ်​အက်​မတ်​​ဂျောလိုက်​ဒီးထူးယပ်​ဟဲရပ်​မာသယ်​ဆိုးလ်​(599) ဒူးဗုတမ်​(လ်​) (183) ဒူးဗူး ဘာတင်​(79)ဒူးဗူးနူး(7)ဒူးဗူးဒီဂပ်​ရယ်​ဘီလီ​အောင်​မဂ်​လာကန့်​​ညှောမာနုဦး​ကျော်​​ကျော်​လှကူယပ်​ကန့်​အက်​ကမ်းမာသယ်​မာနုသာ​ယောရဲ့ဒီဂပ်​ယပ်​တာရားကန့်​​ညှောမာသယ်​မာနု(270)လုပ်​အာနိ ခါး​ဒါးပါရမ်​ဖင့်​မာနုအက်​​ဇောင်​ ဆိုးလ်​(3)ကီလိုအာနိအက်​မက်​လိုက်​ဒီဂပ်​ယပ်​ ဖာရာမာသယ်​ဂါဘာမန်​တုမ်း ​ခေါင်း​အောင်​ဖင့်​ ​မြောက်​ဦး မြို့​ချောင်း၊​ကျောင်း​တောင်​ဖာရာ၊မင်းပြားမာသယ်​ကန့်​​ညောမာနု(2300) အာနိအာသယ်​ဘီလီ ပန်း​မြောင်း​ရွှေ​ပေါင်​တင်​ဖာရာ၊​အောင်​မင်္ဂလာဖာရာထားအူး​ရော​ကျောင်းမာသယ်​မတ်​(9)တိန်​​​ညော့မာနုအာသယ်​ ​မော့စ်​​ဂေါဒါ့တ်​​အေ​အေလို ဂါဘာမန်​လို​ဘောဒူးလဂါဒီ​ကေ​ဂျောင်​​မော့စ်​​ဂေါဒါတ်​​မြောက်​ပိုင်းမာသယ်​ကမ္ဘာစားနပ်​ရိက္ခာWFPလို၊အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာကြက်​​ခြေနီ​ကော်​မတီICRC-NGO-INGO​ဒေါဝါးရပ်​ကာဒါဒီ​ယောတယ်​လိုက်​ကန့်​ညောမာနုရပ်​ဇာညာဒီပါရားပါတီဒယ်​​ကောင်​မူအာသယ်​ 274 total views
ရိုးမရေဒီယို မဂ္ဂဇင်း – မတ်လ စတုတ္တ သီတင်းပတ် [ရခိုင်ဘာသာအစီစဉ်]
Posted on March 30, 2019 April 3, 2019 by Editor
ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း – မတ်လ စတုတ္တ သီတင်းပတ် [ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနေမူဆလင်ဘာသာစကားအစီစဉ်]
Posted on March 30, 2019 April 23, 2019 by Editor
ထူး | ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်တေ စစ်တွေမြို့ကနီ ဆတ်ရိုးကျချောင်းကို ဖြတ်ထိုးထားရေတံတားကို ဖြတ်ပနာ ဆတ်ရိုးကျ မြို့သစ်ရပ်ကွက် (ကယ်ဆယ်ရေး) ကိုလားကေ ချောင်းထဲမှာ ရပ်နားထားရေ ဘုတ်ကြီး၊ ဘုတ်ချေတိအပါအဝင် ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်သားအများကြီးကို ခါတိုင်းပိုင် မြင်တွိမိကတ်ပါဖို့။ ယင်းပိုင်မြင်တွိနီကျမဟုတ်ဘဲ နွီရာသီရောက်လာကေ ထထူးဆဆန်းမြင်တွိရဖို့ အရာတစ်ခုရှိနီပါရေ။ ယင်းချင့်ကတော့ကေ ဆတ်ရိုးကျ တံတားအောက်က ဘဝကို ထူးဆန်းစွာ […]
ရခိုင်စစ်ရှောင်စခန်းအချို့ကို WFP မှ စားနပ်ရိက္ခာအချို့ထောက်ပံ့
Arakan Yoma | ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ပန်းမြောင်းတိုက်နယ်က စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအချို့ကို ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP က ဆန်အပါဝင် ဆီ၊ ပဲနဲ့ ဆားတိ ပါဝင်ရေ စားနပ်ရိက္ခာအချို့ကို မတ်လ ၂၇ ရက်နိက ကူညီထောက်ပံ့ပီးခပါရေ။ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည် ဦးရေ ၂၃၀၀ လောက်ရှိရေ အဆိုပါ ပန်းမြောင်းဒုက္ခသည် စခန်း ၃ ခုက ဒုက္ခသည် […]
ထူး | ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ စစ်တွေမြို့ကနေ ဆတ်ရိုးကျချောင်းကို ဖြတ်ထိုးထားတဲ့ တံတားကိုဖြတ်ပြီး ဆတ်ရိုးကျ မြို့သစ် ရပ်ကွက် (ကယ်ဆယ်ရေး) ကိုသွားရင် ချောင်းထဲမှာ ရပ်နားထားတဲ့ စက်လှေကြီး၊ စက်လှေငယ်တွေအပါအဝင် ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်သားများ စွာကို ခါတိုင်းလိုလို မြင်တွေ့မိကြမှာပါ။ အဲဒီလို မြင်တွေ့နေကြ မဟုတ်ဘဲ နွေရာသီရောက်လာရင် ထူးဆန်းစွာမြင်တွေ့ရမယ့် အရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ […]
﻿ရခိုင်စစ်ရှောင်စခန်းအချို့ကို WFP မှ စားနပ်ရိက္ခာအချို့ထောက်ပံ့
Arakan Yoma ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် ပန်းမြောင်းတိုက်နယ်မှ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းအချို့ကို ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ WFP က ဆန်အပါဝင် ဆီ၊ ပဲနဲ့ ဆားများပါဝင်သည့် စားနပ်ရိက္ခာအချို့ကို မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည် ဦးရေ ၂၃၀၀ ခန့်ရှိသည့် အဆိုပါ ပန်းမြောင်းဒုက္ခသည် စခန်း ၃ ခုမှ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် တစ်လ […]
ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း – မတ်လ တတိယ သီတင်းပတ် [မြန်မာသာအစီစဉ်]
Posted on March 21, 2019 March 26, 2019 by Editor
မင်္ဂလာပါ မြန်မာဘာသာအစီစဉ် ပရိသတ်များ ခင်ဗျား . .. . ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း မတ်လ တတိယ သီတင်းပတ်မှာ ထုတ်လွှင့်မယ့် အစီစဉ်ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ . ဒီတစ်ပတ် သတင်းအစီစဉ်ထဲမှာတော့ – အစိုးရဖက်က ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ လူငယ်အင်အား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ့် လူငယ်ရေးရာကော်မတီကို ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ ခရိုင်မှာ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ […]